Kahor kulanka Kiev… isbarbar dhig cajiib ah ee laga sameeyay Mohamed Salah booqashooyinkiisii hore ee dalka Ukraine – Gool FM
Kooxda Arsenal oo Manchester United ka afduubanaysa saxiixa xiddig ay doonayso oo ka tirsan PSG
Marcos Alonso oo iska diiday inuu meesha ka saaro inuu ka tago xagaagan kooxda Chelsea
Shaxda rasmiga ah kulanka finalka Cop del Rey ee kooxaha Barcelona vs Valencia
Kooxda Manchester United oo dalab ka gudbinaysa Moussa Dembele… (Imise Milyan ayuu ku kacayaa dalabkaasi?)
Muxuu ka yiri Mourinho, kaddib markii la weydiiyay suurtogalnimada uu markale dib ugu laaban karo Real Madrid??
Kahor kulanka Kiev… isbarbar dhig cajiib ah ee laga sameeyay Mohamed Salah booqashooyinkiisii hore ee dalka Ukraine
(Liverpool) 23 Maajo 2018. Xidiga kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa wuxuu isku diyaarinayaa kulanka Real Madrid ee finalka Champions League ay sabtida soo aadan kuwada ciyaari doonaan magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine.
Hadaba kahor kulankan Kiev waxaa isbarbar dhig lagu sameeyay kulamadii uu horey Mohamed Salah ugu soo ciyaaray dalka Ukraine.
Mohamed Salah ayaa markii ugu horeesay booqday dalka Ukraine bishii February 21, 2013, xiligaas oo ay kooxdiisii hore Basel la ciyaartay dhigeeda dalka Ukraine ee FC Dnipro, kaasoo ka tirsanaa Europa league, wuxuuna kusoo idlaaday barbaro 1-1.
Booqashadiisii labaa ayaa ahayd April 16, 2015, kadib markii ay kula soo ciyaareen wareega afar dhamaadka Europa league kooxda FC Dynamo Kyiv, xiligaas uu ku sugnaa Fiorentina, wuxuuna kulankan sidoo kale kusoo idlaaday 1-1-
Isbarbar dhiga cajiibka ah ee booqashooyinka Mohamed Salah ee dalka Ukraine ayaa waxay dhamaantood ahaayeen tartanka Europa league, waxayna kulamadii uu booqday dhamaantood kusoo wada idlaadeen barbaro 1-1.
Rikoor nuucee ah ayuu ka haystaa Unai Emery tababareyaasha uu la tartami doono ee Guardiola iyo Mourinho
Unai Emery oo durba ka caraysiiyay Mesut Ozil (Muxuu sameeyay?)